Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd ukuthi estabilished ngo-1993 Kusukela manje thina main babe lezisekelo ezintathu production ngokulandelana elise 1.Qingdao Shangdong, 2.Xi'an Shanxi kanye 3.Liuzhou Guangxi. Setted up 28 Amahhovisi Izikhungo Kwebhizinisi ezifuywayo kwezilwandle ..
"CO-NELE brand" evela German oluseqophelweni esiqinile nefilosofi lobuchwepheshe, thina ehlangene technical ucwaningo, ukukhiqiza, yokuthengisa emva-sales service ndawonye.
imishini Ukwakhiwa kuhlanganise Boom Pump Truck 25m ukuze 56m, Ukhonkolo Ufaka Boom uhlobo Ucingo HGY13 ukuba HGY23, Self ukucaca uhlobo 24M ukuze 35M, Small aggregate esihle XBS serial Pump Ukhonkolo 20-40m3 / h, JBT yomkhiqizo Ukhonkolo Mixer Pump 30-40m3 / h, HBT yomkhiqizo Ukhonkolo Pump30-100m3 / h, Shotcret sishaye Umshini, Batching Plant nokunye.
Njengamanje, imikhiqizo yethu kwakutholakala wonke China futhi akhishwe lapho isibuyele eRussia, Korea, Kazakhstan, Iran, Mongolia, Egypt, Singapore, Malaysia, eVietnam, Indonesia, e-Australia, Romania, America, Niger, Congo, Mauritius nakwamanye amazwe . CO-NELE nokusebenza yayo super futhi umoya inethemba lokuhle zikhonza ngenxa emhlabeni wonke.